Dib-u-eegista Taranka Afgaanistaan - Taranka
Waa maxay Afgaanistaan?
Afqaanistaanku waxay ka yimaadeen kooxda hound, ama haddii si sax ah loo sheego waxay ka soo jeedaan reerka aragga laga arko, oo dhammaantood aad u dheereeya, eeyaha u ekaada greyhound-ka u eg ee wax cunaya ayaa qayb ka ah.
Eyga reer Afgaanistaan ​​wuxuu taagan yahay 26 illaa 28 inji dusheeda marka la engegayo, halka qaniinyadu dheerarkeedu yahay 24 illaa 26 inji. Ragga culeyskoodu waa ku dhowaad 60 rodol, dheddiguna waa qiyaastii 50 rodol.
Muuqaalka ugu badan ee lagu xirayo reer Afgaanistaan ​​ee xarrago leh waa jaakaddiisa, taas oo dheer oo xariir leh meel kasta oo eyga ah, marka laga reebo wejiga iyo dhabarka, halkaasoo ay ku gaaban tahay oo dhalaalaysa.
Meeqa sano ayuu yahay nooca?
Muxuu ahaa afgaanistaanku inuu sameeyo?
Maxaa Afgaanistaan ​​loo adeegsadaa maanta?
Ma fududahay in la tababaro?
Midabkee ayay soo galaan?
Ma u baahan yihiin jimicsi badan?
Eyyada Afgaanistaan ​​ma sahal baa lagu siiyaa dadka guriga wada deggan?
Iyada oo leh timahaas oo dhan, miyaanay ku adkaanayn in la xajiyo?
Afqaanistaan ​​ma leeyihiin wax cillad hidde ah?
Dabeecadoodu sidee tahay?
Afqaanistaanku ma leeyihiin wax qashin ah?
Mudo intee le'eg ayay nool yihiin?
Ma ku fiican yihiin carruurta?
Wax badan ma cunaan?
Sidee u caqli badan yahay Afgaanistaan?
Afqaanistaanku ma yihiin nooc caan ah?
Xagee wax badan ka ogaan karaa dadka reer Afgaanistaan?
Afqaanistaanku wuxuu ku fiicanyahay orod jaban oo duurjoog ah, iyo jilicsanaanta, adkaysiga, adkaysiga, iyo khiyaanada ayaa ah halyeeyo. Afgaanistaanku waxay labalaabi karaan galgala xawaare ugu yaraan ah 35 illaa 40 mph oo daaran dime, waxay qaadan karaan bood ballaaran oo ah 20 fuudh waxayna ka boodi karaan 7 cagood oo toos ah iyagoo taagan.
In kasta oo cawlku qaadan karo sumcad ahaan inuu yahay midka ugu da'da weyn aragga, Afqaanistaan ​​iyo Saluki ayaan wax badan ka dambeyn. Xaqiiqdii, waa digaag iyo ukumo su’aal ah labada lab ee dambe yaa u horreeyay.
Nasiib darrose, wixii macluumaad ah ee ku saabsan qadiimiga Afgaanistaan ​​waxaa lagu lumiyay ceeryaamo waqtiga.
Su'aal la'aan, labada noocba waxay kumanaan sano jirsadeen bilowgiina, waa lakala dhexgalay si loo soo saaro xayawaanka ugu fiican cimilada iyo dhulka la ugaarsan karo. Dunida Galbeedku waxay ogaadeen Afgaanistaan ​​intii lagu jiray qarnigii 19aad markii askarta Ingiriiska ay tijaabooyinkii ugu horreeyay dib ugula soo noqdeen England.
Asal ahaan waxaa jiray laba nooc oo reer Afgaanistaan ​​ah: Kalluunka aadka u dahaadhan, buuraleyda isku dhow dhow iyo nooca lamadegaanka oo xarrago leh oo qurux badan, oo wata jaakad yar. Lama degaanka iyo noocyada buuraha ayaa lakala dhex galay, iyadoo soo saaraysa Afgaanistaan ​​maanta naqaan.
Dadka reer Afgaanistaan ​​waxaa ku soo caano maalay dadyowga Afghanistan, Pakistan iyo waqooyiga Hindiya si ay ugu kala gudbaan dhulka buuraleyda ah. Xayawaankan boqortooyadu waa ugaarsi ugu horreeya ee shabeellada; ugaadhsiga taariikhdiisa, laakiin iyagu waxay hoos u dhigi doonaan ama ku hayn doonaan wax uun oo iyaga ka soo cararaya.
Waxaa iska lahaa boqortooyo iyo qabiil isku mid ah shaqadooda ugu weyna waxay ahayd inay ilaaliyaan tuulooyinka, inay cuntada ku ridaan dheriga cashada, ama inay si fudud u bixiyaan madadaalo banaanka ah oo loogu talagalay dadka gobta ah.
Ugaadhsade ahaan, Afqaanistaan ​​Hounds waxaa loo qabtay si aad u qiimo badan. In kasta oo ugaadhsadaha boqortooyada la hakin jiray, eeyaha tuulada ayaa ahaa kuwo nus-caan ah oo si wanaagsan loogu yaqaanay is-daryeelidda naftooda.
Falcons inta badan waxaa la duula eeyaha marka ay leyneyso xayawaan badeedka. Eeyaha waxaa lagu ordi jiray xarigyo ama kali kali ah ugaarsiga oo dhan, waxay kuxirantahay xoogga eyga shaqsiyeed.
Waxaa jira xisaabaad goobjoogayaal ah oo muujinaya in reer Afgaanistaan ​​ay kaligood hoos u socdaan shabeello, bisadana qoorta kaga qabteen qoorta garbaha korkeeda oo ay ka qaniinayeen lafdhabarta si loo dilo.
Afgaanistaanka maanta sida caadiga ah waxaa loo hayaa sidii xayawaan guri joog ah, maadaama ciyaarta tooska ah eeyaha lagu sii daayo eyna ku sii badneyn. Wadamada qaar gebi ahaanba waa mamnuuc. Afqaanistaanku waa kuwa jecel eeyga eyga iyo qufuladooda socda iyo dabeecaddooda ka fog, way adag tahay in lagu garaaco sidii showmen.
Qaar ka mid ah dadka reer Afgaanistaan ​​ee nasiibka u yeeshay waxay leeyihiin milkiilayaal iyaga u qaata inay soo jiitaan, oo ah isboorti u dhiganta ugaadhsiga indhoolayaasha. Markuu Afqaanistaan ​​dhab ahaantii go'aansado inuu jecel yahay adeecida, wuxuu ku qaban karaa sida ugu fiican.
Maya, maahan. Afgaanistaan ​​waa feker xor ah. Tani waxay ahayd daruuri eyga loo soo saaray inuu koorsado bisadaha waaweyn. Reer Afgaanistaan ​​way ka adkaan karaan wax kasta oo ku saabsan dhulka dhagaxa ah ee aan sinnayn, waxaana badanaa loo daayay naftooda 'qabashada'. In kasta oo Afgaanistaanku yahay mid caqli badan oo dhagar badan, wuxuu tan ugu adeegsan doonaa dantiisa.
Khiyaanadu waxay tahay inaad Afgaanistaan ​​ka dhigto inuu u maleeyo in wax kasta oo aad jeceshahay inuu sameeyo ay runti tahay fikrad isaga u gaar ah, ka dibna lagu ammaano inuu caqli badan yahay. Afqaanistaanku uma qaataan habab tababar adag oo haddii loola dhaqmo si qallafsan, badanaa waxay si fudud u diidi doonaan inay waligood sameeyaan jimicsigaas mar kale.
Afgaanistaanku wuxuu noqon karaa mid dhagool ah marka la weydiisto inuu sameeyo wax uu u arko inuu ku hooseeyo. Waxay sidoo kale noqon karaan kuwo hal abuur leh marka ay adeecayaan, taas oo aad uga xumaatay milkiilayaasha tartanka.
Reer Afgaanistaan ​​waxay ku yimaadaan midabbo oo dhan laakiin dhibco, laakiin calaamadaha caddaanka ama caddaanka ah, gaar ahaan wejiga, waa laga xumaaday. Midabada ugu caansan waa madow, madow iyo midab madow iyo casaan madow oo waji-madow ah. Mid ka mid ah qodobada ugu xiisaha badan ee reer Afgaanistaan ​​waa qaansoroobaad uu ku imaan karo isagoo lagu qurxiyay!
Midabada caadiga ah ka sokow, waxaa jira midab cagaaran oo buluug ah, xarriiqyo kaladuwan oo midabbo kala duwan leh, buluug buluug ah, kareemada qalinka, iyo iskudhafyo kala duwan oo dhammaantood leh ama aan qarsanayn.
Mid ka mid ah midabada aan caadiga ahayn waa 'domino,' halka midabka eeyga wejigiisa uu ka fudud yahay dharka jirka oo leh maaskaro gadaal madow oo ka bilaabma indhaha, sida Mickey Mouse cap saameyn.
Midabbada oo dhan, cirifka indhaha, bushimaha, iyo maqaarka sanka waa inay ku madow yihiin midabka. Kelmadaha kelmadood ayaa cirro ku leh agab kaleidoskope ee midabada ay Afgaanistaan ​​xidhan karaan.
Intuu Afgaanistaan ​​aad ugu joogo guriga sariirta daawashada TV-ga, wuxuu ubaahan yahay jimicsi badan ama wuu caajisi doonaa. Afgaanistaan ​​caajis ahi wuxuu ku sameyn karaa qadar aan la qiyaasi karin oo dhaawac aan caadi aheyn u leh guri iyo waxyaabaha ku jira.
Houndadan u eg bisadda ayaa furi doonta khaanadaha oo dhammaan dharkaaga hoosta ka wada saari doonta si aad calalin wanaagsan ugu sameyso, u fuul miiska qolka cuntada si aad uga daba tagto dabagaley daaqadda ka baxsan ama ka xado cashada caawa dusha sare ee qaboojiyaha.
Iyada oo daamanadooda xoogga leh, waxay ku dhex daadin karaan gacanta kursiga waqti aad u yar. Daarad deyr wanaagsan leh waa lama huraan, maaddaama reer Afgaanistaan ​​ay ku tuman karaan xawaare dhan ilaa 12 mph saacado dhammaad ah oo xitaa aysan si adag u neefsan karin.
Maya, maahan. In kasta oo ay aad ugu xiran tahay shakhsiga gaarka ah, haddana sida caadiga ah Afqaanistaanku ma jecla in loo sheego waxa la qabanayo. Illaa iyo lix bilood reer Afgaanistaan ​​lagama filan karo inay nadiif ahaadaan, maadaama aysan u bislaanin inay sii haystaan ​​muddo dheer.
Markii la tababarayo qof kasta oo reer Afgaanistaan ​​ah, waxaa loo baahan yahay dulqaad iyo roonaan. Dareen wanaagsan oo kaftan ah ayaa sidoo kale caawiya.
Haa, qurxinta ayaa ah hawl loo baahan yahay in laga qeyb galo toddobaadle ah iyada oo aan laga gaabin. Afqaanistaanku waxay u baahan yihiin qubaysyo toddobaadle ah iyo burush si ay uga hortagaan in jaakaddaas quruxda badani ay noqoto wax laga xumaado oo jahawareersan.
Qaabka dharka ayaa si dabiici ah u kobcaya. Pups badanaa waa ka fog yihiin waxa milkiilaha cusub rajaynayo, maadaama aysan u ekaan dadka waaweyn ee daboolka dheer. Pups-ka Afgaanistaan ​​waxay ku dhashaan si jilicsan. Jaakadda qafiifka ah, jilicsan eey yar yar ayaa tartiib tartiib ugu soo baxda.
Qiyaastii hal sano jir ah, jaakada sii kordheysa ee jaakada dadka waaweyni waxay bilaabaysaa inay is muujiso oo jaakada yar eeydu waxay bilaabataa inay dhacdo, mararka qaarkood waxay qaadataa ilaa eeygu saddex sano jirsado ka hor intaanu gebi ahaanba tagin.
Waqtigaani waa waqtiga daryeelka koodhku noqdo riyo qarow, maaddaama jaakadda yar ee yaryari ay iskudhafan yihiin oo ay ku dhegsan yihiin jaakadda sii kordheysa ee dadka waaweyn. Qaar ka mid ah dadka reer Afgaanistaan ​​ee xayawaanka ah ayaa isu arka inay hoos u dhacaan marxaladan, maadaama milkiilaha si fudud u quusanayo
Dadka waaweyn ee reer Afgaanistaan ​​waxay u nugul yahiin daadinta guga iyo deyrta kadib xanuunada iyo qaniinyada aan la arkin ayaa waayi doona jaakad xilli kasta ka dib. Kalkaaliyeyaasha miyir-qabka ah ayaa had iyo jeer sharxi doona is-khiyaanooyinka daryeelka jaakadda wanaagsan dhammaantoodna waxay siinayaan milkiileyaasha cusub casharo qurxin ah.
Afqaanistaan ​​xanuunsan ayaa u nugul dulin, barar iyo cudurada maqaarka, sidaa darteed taxaddar taxaddar leh ayaa aad muhiim u ah.
Nasiib darrose, way sameeyaan laakiin way uga nugul yihiin kuwan qaar ka mid ah noocyada kale. Hip dysplasia, cataracts carruurta, hypothyroidism iyo cilladaha enzyme ayaa laga heli karaa nooca. Guud ahaan, noocyadu waa mid caafimaad qaba.
Afqaanistaanku waxay ka ordi karaan gamut ka geesinnimo daran ilaa xishood daran, tanina waxay ku dhici kartaa xitaa dadka dhexdooda ku dhashay isla qashinka. Bulsheynta ayaa muhiimad weyn u leh isirkan, maadaama ay noqon karaan kuwo bahal ah haddii loo daayo naftooda.
Guud ahaan, Afqaanistaanku waxay noqon karaan kuwo istaaga oo mararka qaar ka feejignaada shisheeyaha. Dabeecaddooda gacanta sare iyo sayidnimo waxay ka dhigeysaa iyaga eeyo wanaagsan oo wax celiya. Waxay dooran doonaan asxaabtooda, si aad ah sida bisaduhu u dooran doonaan.
Ku dhowaad saaxiibbadiis ugu fiican, Afgaanistaan ​​wuxuu muujinayaa majaajilkiisa, madax adayg iyo cabsi cabsi leh oo caqli badan.
Ayadoo ay wataan ugaarsi sare, reer Afqaanistaan ​​waxay eryan doonaan oo ay diri doonaan wax kasta oo iyaga ka soo baxa waana inaan marna loo oggolaan inay si weyn u ordaan. Haddii lagu soo qaado saaxiibtinimo, Afqaanistaanku waa lagu kalsoonaan karaa bisadda guriga, laakiin wali wuu ceyrsan doonaa qof kale.
Guud ahaan, Afqaanistaanku waa nooc jilicsan oo aan caadi ahayn, laakiin waxaa jira qayb ka mid ah dabeecadda Afqaanistaan ​​oo inta badan la iska indhatiro. Afqaanistaan ​​Hounds waa tuug qalbiga ka xeel dheer waxayna soo diyaarin doonaan wax kasta oo qaata wanaagooda.
Waxay noqon karaan kuwo hal-abuur leh markay galaan meelaha ay milkiilayaashoodu doonayaan inay ka ilaaliyaan, iyo awooddooda inay ku afuufaan cunnada ama maqaallada midigta ka hooseysa sanka milkiilaha ayaa u dhow sixir. Milkiilaha caqliga badan waa inuu sifiican u cadeeyaa gurigiisa isla markaana uu talaabo ka horeeyaa tan dhogorta badan leh ee Houdini.
Markuu reer Afgaanistaan ​​isku arko xaalad walaac leh, inta badan wuu iska seexdaa illaa inta ganacsigu dhammaanayo. Calaamadda kale ee la hubo ee eey kacsan ama welwelsan waa sanka oo qoyan.
Waa wax aan macquul aheyn in Afgaanistaan ​​laga fogeeyo alaabta guriga. Waxay u muuqdaan inay u maleynayaan inay tani tahay meesha ay ku habboon yihiin.
Waxay caan ku ahaayeen inay mulkiilayaashooda ka riixaan sariirta. Xaqiiqda dhabta ah ee reer Afgaanistaan, ma jiro wax beddeli kara jilicsanaanta, madaddaalada, jahwareerka iyo eeyaha boqortooyada badankood.
Nooc ballaaran, Afgaanistaan ​​wuxuu ku nool yahay waqti dheer. 12 illaa 14 sano maahan wax aan caadi ahayn, oo xayawaan 18 jir ah oo caafimaad qaba ayaa la ogaa. Afqaanistaanku waxay la ildaran yihiin cabashooyin badan oo isku mid ah oo gabowga ah oo noocyada kale ay helaan, sida araga oo maqal iyo maqal, iyo arthritis. Kansarka iyo cudurada wadnaha ayaa sidoo kale waxyeelo u geysta taranka sidoo kale.
Markay carruurtu qayb ka yihiin sawirka, waa xikmad in la baro labadaba Afgaanistaan ​​iyo ilmaha ixtiraam wada jir ah iyo sida loo dhaqmo dhexdooda. Reer Afgaanistaan ​​waa nooc taabasho taabasho leh waxayna leeyihiin hillaac dabiici ah oo dabiici ah.
Waxay sidoo kale deggan yihiin oo dulqaad badan yihiin, waxayna leeyihiin caqli badan oo caqli gal ah. Marka qofka reer Afgaanistaan ​​uu ka daalo dareenka, wuxuu iska dhigayaa mid yar, isagoo ka fariisanaya meel ka fog dadka oo uu ku seexdo.
Maaddaama reer Afgaanistaan ​​ay yihiin nooc ka mid ah eeyaha dhaadheer, ee tooska ah, waxay cunaan wax aad uga yar cabirkooda. Reer Afgaanistaan ​​waxay u baahan yihiin cunno ey qalalan oo tayo sare leh, oo leh saliid badan oo khudradda ah si ay u sii ekaadaan una dareemaan sida ugu fiican.
Sidoo kale waa lagama maarmaan in laga ilaaliyo kuwa dhegta dheer dhegaha leh snoods. Koofiyadaha nooca tuubada lagu keydiyo ah ayaa dhagaha gadaal ka celiya saxanka oo Afqaanistaan ​​dhaqsiyaha badan timaha ma ciidayo.
Buug hadda socda oo caan ah ayaa argagax weyn ku abuuray milkiilayaasha reer Afqaanistaan ​​ee adduunka oo dhan markii ay ku qiimeeyeen qofka Afqaanistaan ​​ah ee ugu dambeeyay liiska 'sirdoonka shaqeeya'.
Shaqada sirdoonka wax shaqo ah kuma lahan 'caqli' dhab ah oo nooc kasta ah. Noocyadaas waxay u horumariyeen inay si dhow ula shaqeeyaan aadanaha, dabcan, waxay noqon doonaan kuwo aad loogu kalsoonaan karo tababarka marka loo eego xariifka reer Afgaanistaan, oo shaqadiisu ahayd inuu la dagaallamo ugaarsiga halista ah kaligiis, isagoo ku tiirsan caqligiisa si uu u arko isaga oo u maraya nolol iyo ugaarsi maalin kale.
Afgaanistaan ​​waxay soo martay maalin aad u wanaagsan dhammaadkii lixdamaadkii iyo horraantii toddobaatanaadkii. Laga soo bilaabo wakhtigaas illaa iyo tan, taranka ayaa nasiib wanaag hoos ugu dhacay ra'yi uruurinta haddana wuxuu fadhiyaa hareeraha booska lixaad, labadaba Kanada iyo Mareykanka. Nooc u baahan baahida nooc gaar ah oo milkiile, taasi ma xuma.
Waxaa jira buugaag badan oo heer sare ah oo laga heli karo nooca. Maktabadaha badankood waxay urursadaan hal cinwaan ama mid kale laakiin nolosha dhabta ah, khibrad gacmeed, waxaa loo soo jeediyay in milkiileyaasha iman kara ay ka qeyb galaan bandhigyada eyga maxalliga ah lana hadlaan dadka jecel.
Naadiga Afgaanistaan ​​ee Hound Club ee Kanada, waa naadi qaran oo xoghaynteeda, Debbie Hodgins, lagala soo xiriiri karo PO Box 60, Hanley, Sask., S0G 2E0, Kanada uma jirto oo keliya inay u adeegto fannaaniintii hore laakiin waxay ka caawineysaa kuwa cusub ee ku jira nooca.
Dhiggeena Mareykanka, Naadiga Afqaanistaan ​​ee Hound Club of America waxaa laga yaabaa in lala soo gaaro Ms. Norma Cozzoni oo laga helo 43W612 Tall Oaks Trail, Elburn, IL 60119, USA.
Taranka Eygaaga: Maxay Tahay Inaad Ogaato
34 Dabeecadaha Eyga Wanaagsan iyo Kuwa Xun
teacup siberian husky buuxa oo koray
alaskan klee kai cabbirka toy iibka
eygu wuu kacaa laakiin ma matago
cocker mareykan ah spaniel poodle mix
shaybaadhka jaalaha ah ee dib u soo celinta dahabiga ah ee isku dhafka ah
muxuu u eg yahay pitbull